Iindaba - Uyikhetha njani ibrashi yokupeyinta yobugcisa kwabaqalayo?
Ipeyinti ye-acrylic Brush
Inkcazo yePeyinti efanelekileyo
Ipeyinti yebrashi yeoyile
Ipeyinti yepeyinti yamanzi
I-Kolinsky Nail Brush
Uyikhetha njani ibrashi yokupeyinta yobugcisa kwabaqalayo?
Iindidi zeebhrashi zokupeyinta ezenziwa qho esihlala sizisebenzisa ekupeyinteni zezi zilandelayo: Uhlobo lokuqala yifayibha yendalo, yona ibristles. Kubandakanya i-bristles, iinwele zengcuka, iinwele ze-mink njalo njalo. Udidi lwesibini yifayibha yemichiza. Sihlala sisebenzisa i-nylon.
Ibrashi yokupeyinta entsha ye-artiest ithengiwe ukwenza inkqubo elula. Ukuba ibrashi yepeyinti yendalo, ezinye zazo zinamathele. Olu hlobo lwebrashi yepeyinti lunokuntywila emanzini afudumeleyo imizuzu eli-15 kwaye emva koko ucofe kancinci. Emva kokuba iinwele zebrashi zikhululiwe, coca iglu eseleyo ngamanzi acocekileyo. Ukuba ibrashi ayincanyathiswanga, inokusetyenziswa ngokuthe ngqo, kodwa kungcono ukuba uhlambe ngamanzi ukuze ususe iinwele ezidadayo kwibrashi. Iifayibha zendalo ezenziwe ngepeyinti zibandakanya iifayibha ezintle ezinje nge-mink yeenwele, iinwele zeengcuka, njl njl, kunye neebrashi ezinobungqingili ezifana neebristles.
Iifayibha zebrashi zemicu yeekhemikhali zihlala zibhityile, kwaye ukomelela kuyahluka kakhulu ngokuxhomekeke kuhlobo. Nangona kunjalo, ukufunxwa kuhlala kungalunganga, kwaye kufanelekile ekubunjweni okungcono. Ukukhethwa kweebhulashi kusekelwe kwiimfuno zomntu wegcisa kunye nezakhono zakhe.
Ibrashi ye-fiber-bristle ye-artist ebalaseleyo yepeyinti ine-elasticity elungileyo, kwaye imivumbo yebrashi ye-bristle iyabonakala, ethi incedise ukuqokelelwa kombala ukwenza umphumo wokuthungwa. Ibrashi ye-bristle ayilungelanga ukusetyenziswa kwakhona. Ngenxa yokuqina kwayo okunamandla, kuyingozi kakhulu ukuphindaphinda ukufaka isicelo kumaleko wepeyinti ongekoma. Ngokukodwa xa umaleko wombala osezantsi unciphile kakhulu, ngoncedo lwento enyibilikayo, kulula ukukrwela umaleko wombala osezantsi kunye nokuveza ezantsi kwepeyinti.
Umzobo webrashi weKolinsky
Iibhulashi ezinjengeenwele ze-kolinsky kunye neenwele zeengcuka zinobuchule obuhle kwaye azihambelani nemivimbo ebonakalayo. Zilula ukunxibelelana kwaye kufanelekile ukuzoba imizobo emincinci neyentekenteke yesiko. Ezi brashi zilunge kakhulu kwisicelo esincinci ngenxa yokuqina kobuthathaka kodwa ukufunxeka okugqwesileyo. Ingakumbi ibrashi yenylon embozwe ngombala omkhulu ine-elasticity egqwesileyo kwaye inako ukuzoba imivumbo ecacileyo nenamandla kwinkqubo yokubonisa kakuhle.
Idilesi: No.1 Aixihu South Road Qingshanhu District Nanchang City Jiangxi Provience, 330095